Ogaden News Agency (ONA) – Baroor-Diiq Qaran oo Ka Bilaabatay Wadanka Ruushka.
Baroor-Diiq Qaran oo Ka Bilaabatay Wadanka Ruushka.
Wadanka Ruushka ayaa waxaa ka billaabatay baroor diiq qaran oo lagu xusayo 92-dii qof ee dhintay ee isugu jiray rakaabka iyo howlwadeenada diyaaradii milateriga ee Axaddii ku dhacday Badda Madow xilli ay ku sii jeedday waddanka Suuriya.
Ruushka ayaa sheegaya in la soo saaray maydadka 10 qof oo ka mid ahaa dadkii ay diyaaraddu la dhacday. Wasiirka gaadiidka ee dalka Ruushka, Maxim Sokolov, ayaa sheegay in khalad uu sameyaay duuliyaha iyo cilad dhinaca farsadmaa ah oo ku timid diyaaradda ay sababa u ahaayeen burburka.
Waxaa Badda Madow ka socdo dadaallo lagu baadi goobayo maydadka dadkii saarnaa diyaardaasi burburtay. Diyaarddan ayaa burburtay wax yar uun ka dib markii ay ka duushay magaalo xeebeedka Sochi ee dalka Ruushka.
Wasaaradda difaaca waxay sheegtay in diyaaradda oo nooceedu ahaa Tu-154 ay siday kooxda ugu sarreysa Muustikada ee ciidammadda Ruushka ee lagu magacaabo Alexandrov iyo wariyeyaaal.